Filtrer les éléments par date : samedi, 14 septembre 2019
Ny taona 2016 nandritra ny nampiantranoan’i Madagasikara ny fivoriamben’ny Frankôfônia no niresahana ny hanajariana iny lakandranon'ny Pangalanes iny. Naneho ny fahavononany hanome tanana ny Malagasy tamin’izany ry zareo Maraokanina.
Liana ny hanao asa fihariana mikasika ny fizahantany sy fampiantranoana manamorona iny lakandrano iny rahateo ny mpandraharaha Maraokanina, ankoatra ny fanamboarana hopitaly ho an'ny Reny sy zaza ao Antsirabe ary koa ny fanofanana ara-teknika. Enim-bolana no nambara tamin’izay fa hanaovana ny fanadihadiana mialoha ny asa, mikasika io lakandrano io.
Notanterahina tao amin’ny Kianja Mitafo Mahamasina – Antananarivo, androany sabotsy 14 septambra 2019 ny lanonana famoahana tamin'ny fomba ofisialy ireo Mpikabary Katolika miisa 669 mianadahy. Mandrafitra ny andiany « François d’Assise » izy ireo.
« Andrianiko ny teniko, itoriako ny Vaovao Mahafaly » no tarigetra napetraky ny fikambanan'ny Mpikabary Katolika, na ny Mpikalo.
samedi, 14 septembre 2019 20:29
Fifidianana kaominaly: Henika kandida Ben’ny tanàna ny Kaominina rehetra
Misy kandida mpirotsaka fidiana ho Ben’ny tanàna avokoa ireo Kaominina miisa 1 695 manerana ny Nosy. 6129 ny isan’ny antotan-taratasy firotsahan-kofidiana voaray teny anivon’ireo OVEC (Organe de Vérification et d'Enregistrement des Candidatures) miisa 119.
Kaominina roa ao anatin’ny Distrikan’Ambatondrazaka, dia Antsangasanga sy Amparihitsokatra, amin’ireo Kaominina miisa 1 695 manerana ny Nosy kosa no tsy nisy firotsahan-kofidiana ho mpanolontsain’ny tanàna voaray teny anivon’ny OVEC. Miisa 4 609 ireo antotan-taratasy firotsahan-kofidiana voaray, izay mitsinjara amin’ireo Kaominina 1 693.
samedi, 14 septembre 2019 19:29
Hetsika "Ady Jamala": Rongony 150 000 fototra sy 2980 kg nopotehina
Nahitam-bokatra ny folo andro naharetan’ny hetsika « Ady Jamala » nataon’ny Zandarimaria tao anatin'ny Distrikan'Ambanja sy Ambilobe.
Rongony 150 000 fototra, milanja 1680 kg, tamina velaran-tany 20ha tao Andohan'ifasy, sy rongony maina saika hamidy mitontaly 1300 kg, tratra teny amin'ireo kizo Mevadoany-Mahadera, Kaominina Marotolana sy Ambohitrandriana-Betaindambo, Kaominina Marovato, no nopotehin’ny Zandary nandritra ny hetsika.
Nodorana ny andron'ny 13 septambra 2019, teo anatrehan'ny Lehiben'ny Distrika sy ny Fitsaràna ary ny Fonkotany ireo loza mitatao rehefa vita ny taratasy momba izany.
Mandoto, Faratsiho, Tombontsoa, Antsirabe, Antanifotsy ary Ambatolampy : ireo ny tanàna enina hanorenana tobim-pamokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro enina aty amin'ny faritra Vakinankaratra.
Hamokatra 5MW tsirairay ireo toby ireo, ary orinasa Malagasy telo no hanangana azy ireo. Efa vita ny fifanaovan-tsonia tamin’ireo orinasa ireo, niarahany tamin’ny ministeran’ny Angovo, ny rano ary ny akoranafo.
samedi, 14 septembre 2019 19:09
Tetikasa « Base Toliara »: Nandefa taratasy misokatra ho an'ny Filohan'ny Repoblika Malagasy ny CRAAD-OI
Nanao fanairana maika ny Filohan’ny Repoblika ny CRAAD-OI (Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives au Développement - Océan Indien) tamin’ny taratasy misokatra nataony androany 14 septambra 2019, mahakasika ny "radioactivité" ao Ranobe izay itrandrahan’ny tetikasa Base Toliara fasimainty ao amin’ny Faritra Atsimo Andrefana mba ahazoana ilmenita (« ilménite »), sy zirkôna (« zircon ») ary rotila (« rutile »).
« Tandindomin-doza ny Fokonolona », hoy ny taratasy, « noho ny mety ho fiantraika mamoheha-dozan’ity tetikasa ity aminy, koa miandry ny fanambaràna amim-pomba ofisialy » avy amin’ny filohan’ny Repoblika « ny hanohizana na hampijanonana ny tetikasa, satria mandritra izany fiandrasana izany dia manohy ny asany am-pianjonanjonana ireo mpitantana azy ».
samedi, 14 septembre 2019 18:59
Faharo Ratsimbalson: Nirotsaka ho kandida Ben’ny tanàna ao Sorombo - Manakara
Kandida narotsaky ny vovonana politika IRD (Isika rehetra miaraka @ Andry Rajoelina) ao amin’ny Kaominina Sorombo, Distrikan’i Manakara i Faharo Ratsimbalson, amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna hatao amin’ny 27 novambra 2019.
Manamboninahitra ambony tao amin’ny Tafika i Faharo Ratsimbalson. Efa misotro ronono izy ankehitriny. Efa solombavambahoaka, ary efa Ben’ny tanàna tao Belo-sur-Tsiribihina, ary mpikambana tao amin’ny antoko RPSD Vaovao tamin’izany.
Lehiben’ny Faritra voalohany notendrena tao Menabe i Faharo Ratsimbalson tamin’ny 2009. Kandida filoham-pirenena tamin’ny 2013.
samedi, 14 septembre 2019 18:46
BEPC 2019: Efa mivoaka ny valim-panadinana amin’ireo faripiadidim-pampianarana sasany
Raha mbola anatin’ny fitsarana taratasim-panadinana BEPC ny ankamaroan’ireo faripiadidim-pampianarana sy ivotoeram-panadinana, dia efa misy kosa vitsivitsy efa namoaka valim-panadinana.
Efa namoaka valim-panadinana ny CISCO Ikalamavony ao amin’ny DRENETP Matsiatra Ambony. CISCO Faratsiho ao amin’ny DRENETP Vakinankaratra. CISCO Iakora ao amin’ny DRENETP Ihorombe, ary CISCO Ambatomainty ao amin’ny DRENETP Melaky.
samedi, 14 septembre 2019 18:04
Mpivarotra art Malagasy digue: Mangataka ny tany ho azy, sy fanampiana amin'ny fatiantoka ateraky ny fanam-boaran-dalana
23 taona no nampisy ny art malagasy Digue FIMPIAMA.
Mangataka ny fitondram-panjakana ireo mpivarotra eny amin'ny route digue mba hanomezana ny toerana ho azy ireo ho titré-borné noho ny lalana izay efa nafindra toerana.
Izany indrindra no nanatontosana ny dinika niarahana tamin'ireo mpivarotra sy mpanao asa tanana malagasy tamin'ny fiadiadiana ny Repoblika, izay natao teny amin'ny Live hôtel Andavamamba.
samedi, 14 septembre 2019 17:00
CENI: Namoraina ny fandraisana ny taratasim-pirotsahana kandida Ben'ny Tanàna
Tapitra tamin'ny 12 septambra lasa teo ny fe-potoana farany nametrahana ny antotan-taratasy amin'ny fifidianana ben'ny tanana sy ny mpanolontsainan'ny tanana, izay atao amin'ny 27 novambra ho avy izao, teny anivon'ny OVEC manerana ny Madagasikara.
Hita taratra fa dia malaindaina ihany ny taha-pavitrihina ho an'ireo kandida, nefa tamin'ny andro farany vao tonga ny atotan-taratasy amin'arivony maro.